Dante®ကွန်ယက်အဖွဲ့နှင့် New ထိန်းချုပ်ရေး App ကိုအတူ Prism ကိုအသံအပ်ဒိတ်များ Titan နှင့် Atlas အသံ Interfaces - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Dante®ကွန်ယက်အဖွဲ့နှင့် New ထိန်းချုပ်ရေး App ကိုအတူ Prism ကိုအသံအပ်ဒိတ်များ Titan နှင့် Atlas အသံ Interfaces
Prism ကိုအသံင်း၏ဆုရ Atlas နှင့် Titan multitrack အသံ interfaces အပေါ်Dante®အသံကွန်ရက်၏လာမည့်ရရှိနိုင်မှုကြေညာဖို့ကျေနပ်သည်။
2019 ၏ဒုတိယသုံးလပတ်ကနေရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်ပြောင်မြောက်အသစ်ကအနက်ရောင်-fronted Dante သဟဇာတယူနစ်, NAMM 15321 မှာ Prism ကိုအသံတဲ (2019) မှာပြပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားယူနစ်အသစ်တခု Dante MDIO module တစ်ခုပါရှိပါတယ်နှင့် Mac နဲ့ Windows နှစ်ခုလုံးပလက်ဖောင်းရရှိနိုင်သောဆော့ဖ်ဝဲကို app ကို အသုံးပြု. ထိန်းချုပ်လျက်ရှိသည်။ ဒါက Dante ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်တဲ့ကွန်ပျူတာကနေဒါမှမဟုတ်သင့်လျော်သောအဖြစ်တည်ဆဲကို USB connection ကိုမှတဆင့်ယူနစ်များ၏ထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။
Prism ကိုအသံရဲ့ Dante ရဲ့ module တစ်ခု၏နိဒါန်းအစ Pro ကို Tools များဟာ့ဒ်ဝဲတစ်ခုသဟဇာတ connection ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်ခု MDIO ကဒ် option ကိုပါဝင်သော Atlas နှင့် Titan အဘို့အ I / O ရွေးချယ်စရာ၏အကွာအဝေးကိုတိုးချဲ့။
တည်ဆဲ Atlas နှင့် Titan အသုံးပြုသူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုထောကျပံ့ဖို့, Prism ကိုအသံက၎င်း၏အသစ်က Dante ကဒ်နှင့် software ထိန်းချုပ်မှု app ကိုပြီးသားအသုံးပြုမှုအတွက်အားလုံးအဟောင်းများကိုယူနစ်နှင့်အသုံးပြုနိုင်ရဖို့သေချာခဲ့သည်။
ဂရေဟမ် Boswell အရောင်းနှင့် Prism ကိုအသံများအတွက်စျေးကွက်ဒါရိုက်တာ says: "Dante ခြော Ethernet ကွန်ရက်များအနှံ့ဒီဂျစ်တယ်အသံဖြန့်ဖြူးဘို့က de facto standard တစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒီနည်းပညာကိုချောမွေ့စွာချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အသံ interface ကိုထုတ်ကုန်အားဖွင့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုကကတိကဝတ်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း အနာဂတ်။ "
အသစ်က software ကိုထိန်းချုပ် app ကိုအကွောငျး, Boswell ကထပ်ပြောသည်: "သစ် software ကိုထိန်းချုပ် app ကိုလက်ရှိနှင့်အသစ် Atlas နှင့် Titan အသုံးပြုသူများအတွက်အဖြစ် Lyra အသုံးပြုသူများအတွက်လည်းတစ်ကယ့်ကိုအရေးကြီးသော update ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးပေါ် 4K ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အဟောင်းကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူအောင်, တစ်ဦးပြန်လည်တွင်ရှိသောပြတင်းပေါက်တစ်ဦးရှင်းလင်းပိုပြီးအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေတင်ဆက်မှုပေးပါသည်။ "
အသုံးပြုသူများ Dante interface တွင် Prism ကိုအသံက်ဘ်ဆိုက်ကနေတာဝန်ခံအခမဲ့နောက်ဆုံးပေါ် firmware ကိုနှင့် updated software ကိုထိန်းချုပ် app ကို download နိုင်ပါလိမ့်မည်လိုအပ်ပါဘူး။
Dante မှ upgrade လိုသောသူတို့သည် MDIO-Dante ကဒ်ဝယ်ယူပြီးတော့လည်းအပိုမရှိကုန်ကျစရိတ်မှာ Prism ကိုအသံကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့် Atlas သို့မဟုတ် Titan firmware ကိုနှင့် software ထိန်းချုပ်မှု app ကို upgrade နိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက NAMM 2019 သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်မှာ Prism ကိုအသံသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး [အီးမေးလျ protected].
SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ	2019-01-07
ယခင်: Quicklink TX Ravensbourne တက္ကသိုလ်လန်ဒန်နှင့်တော်ဝင်ရှိတ်စပီးယားကုမ္ပဏီအာဏာ
နောက်တစ်ခု: GatesAir နှစ်ဦးအကြီးစား FM ရေဒီယိုအပေးအယူများနှင့်အတူအိန္ဒိယအတွက် Market က-စီးဂီယာဝေမျှမယ်များတိုးချဲ့ခြင်း